Dhulgariirkii Nepal waxaa saadaaliyay saynisyahano | Saadaasha Shabakadda
Sabtidii la soo dhaafay Nepal waxaa gariiriyay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 7'9 oo lagu qiyaaso Richter, isagoo ka tagay in ka badan afar kun oo qof oo ku dhintay dalka gudihiisa iyo dhibanayaal badan oo ku nool meelaha ku hareeraysan sida Hindiya ama Bangaladheesh Waxay ahayd 81 sano in wax sidan oo kale ah aan la soo marin, gaar ahaan laga soo bilaabo 1934 markii dhul gariir ay ku dhinteen 17 kun oo qof oo joogay Kathmandu, caasimada Nepal.
Laakiin dhulgariirkii Nepal, sida ay sheegeen khubarada cilmiga dhulka. waa qayb ka mid ah »saamaynta domino» taas oo qaabaynaysa qaaradda.
Meerahu wuxuu u qaybsan yahay taarikada tectonic, oo geesaha ay yihiin waxa loogu yeero cilladaha. Waxa ugu caansan waa San Andrés Fault, oo ku yaalo galbeedka Waqooyiga Ameerika, oo si sii kordheysa u kala qeybinaya aaggaas Waqooyiga Ameerika. Thanks to dhaqdhaqaaqooda, aragtida guud ee gurigeena ayaa isbedeleysa, aad u gaabis ah, kala goynta qaaradaha ama abuuraysa buuro. Laakiin naxdintaasi waxay khatar ku noqon kartaa noolaha, maxaa yeelay waxay keenaan dhulgariir ama sunaamis, waxay kuxirantahay halka cilladaha la sheegay ay ku yaalliin.
Toddobo qarni ka hor, saxanka Hindiya-Ameerika, laba gariir oo waaweyn ayaa ka kacay. Dhulgariirkii ka dhacay Nepal toddobaadkan dhammaadkiisii ​​wuxuu noqon lahaa natiijada isku buuqsanaanta khaladka tan iyo markaas. Laurent Bolinger oo ka tirsan Komishanka Faransiiska ee Tamarta Kale iyo Atomiga Tamarta iyo kooxdiisuba waxay filayeen dhawr toddobaad ka hor in dhulgariir aad u xoog badani ka dhici doono isla meesha uu ka dhacay.
Kooxda saynisyahannadu waxay awood u yeesheen inay soo ogaadaan jiritaanka gariir hore iyagoo qoday godad ay weheliso cilladda ka socota Nepal min galbeed ilaa bari. Ilaa hadda, waxay heleen raadad gariir dhul gariir sanadkii 1255, 1344 iyo dhawaanahan 1934. Waxay u egtahay suuragalnimada inuu jiro qaab jira, saynisyahannadu way walaaceen.
Aad ayey u badan tahay sida laga soo xigtay Bollinger dhulgariirro cusub ayaa dhici karamaadaama tii dhacday maalmo yar ka hor aysan awood u lahayn inay dhulka jabiso. Marka, xiisaddu waxay mar kale ka dhismi kartaa dusha sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhulgariir ka dhaca Nepal, oo ay saadaaliyeen saynisyahano